मजदुरका लागि छुट्याएको रकम नगरभित्रै वेपत्ता - Mero Sabda
शनिश्चरे, २१ भाद्र । अर्जुनधारा नगरपालिकामा नगरसभाबाट मजदुरहरुको वीमा र अन्य सुविधाको पक्षमा काम गर्ने गरी छुट्याएको ३० लाख रुपैयाँ वेपत्ता भएपछि नगर सदस्यले सामाजिक सञ्जाल मार्फत गुनासो गरेका छन् । वार्ड नं. ७ बाट निर्वाचित सदस्य सन्तोष नेम्वाङले व्यक्तिगत फेसबुक वालमा गुनासो सहित आफ्ना कुरा सार्वजनिक गरेका छन् ।
आर्थिक बर्ष २०७७÷७८ मा छुट्याइएको उक्त रकमका लागि ‘एउटा समिति बनाइ अध्यक्ष र अन्य सहितको मजदुर डेक्स स्थापना गर्ने र निर्माण मजदुरको हरेक समस्या अनि सूचिकृत गर्ने भनेर सोही नगरसभाबाट पारित भएको कुरा जानकारी गराउन चाहान्छु’ भनेका छन् । उनको गुनासो छ, ‘तर आजसम्म न त मजदुर डेक्स स्थापना भयो, न त त्यो विनियोजित रकम मजदुरले प्रयोग गर्न पाए । दुई बर्ष बितिसक्दा पनि अहिलेसम्म त्यो रकम कहाँ छ र किन कार्यान्वयन भएन यो अचम्मलाग्दो विषय बनेको छ ।’
यसै विषयलाई लिएर आफूसँगै एउटै वार्डमा नगरसदस्यमा निर्वाचित मजदुर नेता देवकुमार राई सहित मेयर हरिकुमार रानालाई प्रश्न गर्दा सो विषयबाट अनभिज्ञता जनाएर लेखा तर्फ देखाएनु भएको, लेखा र योजना शाखामा सम्पर्क गर्दा ‘त्यो रकम सायद कुनै विषयमा रकमान्तर भएर आएको हुनसक्छ तर त्यो विषयको बारेमा हामीलाई थाहा छैन’ भन्ने जवाफ पाएको भनी लेख्नु भएको छ ।
उहाँले दुई जना मजदुर प्रतिनिधिले ‘नगरसभामा राखेको प्रस्ताव अनुसार छुट्टिएको रकम के राजनीति गर्नलाई हो ? के यसको सदुपयोग यहाँका स्थानीय मजदुरले गर्न नपाउने हो ? यदि हो भने जिम्मेवार निकायले जवाफ दिनु पर्यो’ भनी सञ्जाल मार्फत नै प्रश्न गर्नुभएको छ, । उहाँले सो रकमका बारेमा ट्रेड युनियन अन्तर्गत खुलेका मजदुर संगठनहरु मौन रहेकोमा पनि गुनासो गर्नुभएको छ । भन्नु भएको छ, ‘यसै नगरपालिकाभित्र रहेका ट्रेड युनियन अन्तर्गत खुलेका मजदुर संगठनहरु किन मौन ? यसको जवाफदेहिता यस्तै संगठनले पनि लिनुपर्छ । के उनीहरुको उत्तरदायित्व होइन ?’
अर्जुनधारा नगरपालिकाका भित्रका सबै वार्ड मध्ये ७ नं. वार्डमा मात्र नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले दुई जना मजदुरहरुलाई वडा सदस्यको रुपमा उम्मेद्वार बनाएको थियो । नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट सन्तोष नेम्वाङ र एमालेका तर्फबाट देवकुमार राई दुबै जना जनताबाट अनुमोदित भएर सदस्यका रुपमा नगरमा प्रतिनिधित्व गरिरहेका छन् ।